प्रधानमन्त्री दाहालले भोट हाले
आज वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ लक्ष्मी मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मतदान गर्ने भएकाले उक्त मतदान केन्द्रमा सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको भीड लागेको थियो । मतादन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाण्डौं फर्किएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा दाहालपुत्री रेणु दाहाल मेयर पदकी उम्मेदवार छिन् ।
Back You are here: Home गृह पृष्ठ
कसले जित्ला भरतपुर महानगरको मेयर ?
भोट होल्ने दिन नजिकै आइसक्यो । हरेक राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आश्वासनका पोका फ्याकेका छन् । आर्थिक समृद्धि, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा, बेरोजगारलाई रोजगारी, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी, बृद्धभत्ता बृद्धि गराउनेजस्ता कुरा सबैका घोषणापत्रमा छन् । जोसुकैले थालनी गरेको होस् राम्रा कामको जस आफूले लिने कोशिस सबैले गरेका छन् । दलका नेता र उम्मेदवारको भाषण सुन्दा सही र गलत छुट्याउन सबैलाई धौधौ हुन्छ । यस्तोमा सर्वसाधारणलाई कुन उम्मेदवार ठीक कुन बेठीक छुट्याउन समस्या परेको अवस्था छ । चुनावमा उठेका सबै उम्मेदवारले जित्छुमात्रै भन्छन्, हार्ने कुरा कसैले गर्दैनन् । यस्तोमा कसलाई भोट हाल्ने भनेर मतदाता अन्यौलमा छन् ।
चितवनको सौभाग्य यहाँ भरतपुर महानगरपालिका पर्छ । देशभरिका ठूला र पुराना शहरहरुलाई उछिनेर भरतपुर महानगरपालिका बन्यो । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने भरतपुर यसै पनि महत्वपूण शहर हो, महानगरपालिका घोषणापछि यसको महत्व र गरिमा झनै बढेको छ । यसैले भरतपुर महानगरमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न राजनीतिक दलहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । भरतपुर महानगरमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा देखा परेको छ । उसले पछिल्ला हरेक निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति बढाउँदै लगेको छ । भरतपुर महानगरमा नेपाली काँग्रेस पनि प्रतिष्पर्धात्मक अवस्थामा छ, उसले तेश्रो शक्तिको रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मेयर पद दिएर चुनावी तालमेल गरेको छ । यसरी भरतपुर महानगरमा उपमेयरसहित बहुमत वडा जित्ने उसले योजना बनाएको छ । महानगरमा तेश्रो शक्तिका रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र बहुमत काँग्रेसलाई दिएर भएपनि नेतृत्व आफूले समाल्ने योजनामा छ ।
शक्तिका हिसावले भरतपुर महागरमा नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो । नेपाली काँग्रेस एमालेकै हाराहारीमा दोश्रो छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको संगठन क्रमशः सानो बन्दै गएको अवस्थामा छ । चितवनको क्षेत्र नं. ३, ४ र ५ मा फैलिएको भरतपुर महानगरपालिकामा विगतका निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको मत हरेक निर्वाचनमा बढिरहेको छ । नेपाली काँग्रेस स्थिर अवस्थामा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको मत हरेक निर्वाचनमा घट्दै गएको छ । संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन २०६४ मा यी तिनवटै क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो । नेपाली काँग्रेस दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपविजेता थियो भने एमाले क्षेत्र नं. ५ मात्र उपविजेता बनेको थियो । संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन २०७० मा यी तीनवटा क्षेत्रमध्ये एउटामा काँग्रेस, एउटामा एमाले र अर्कोमा राप्रापाले जितेको छ । माओवादी उम्मेदवारहरु एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दोश्रो र अन्यमा तेश्रो भए ।
यसमध्ये काँग्रेसले जितेको र एमाले तेश्रो रहेको चितवन क्षेत्र नं. ४ मा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले आफ्नो अवस्थामा व्यापक सुधार ग¥यो । २०७० सालमा १० हजार मत पाएर तेश्रो भएको एमाले २०७१ मा आइपुग्दा १७ हजार मत ल्याएर दोश्रो भयो । यसरी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तीनवटा क्षेत्रबाट जम्मा २४ हजार हाराहारीमा मत ल्याएको एमालेले दोश्रो संविधानसभामा उपनिर्वाचनको मतसमेत जोड्दा ४३ हजारको हाराहारीमा मत पु¥यायो । यस्तै यि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट काँग्रेसले २०६४ सालमा ३२ हजार मत ल्याएको थियो । पछिल्लो निर्वाचनमा उपनिर्वाचनसमेत जोड्दा काँग्रेसले यि तीन क्षेत्रमा ३९ हजारको हाराहारीमा मत पु¥याएको छ । यसैगरी २०६४ सालमा यि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट ४५ हजार मत ल्याएको माओवादी पछिल्लो उपनिर्वाचनसमेत जोड्दा २२ हजार हाराहारीमा सिमित भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको मत अझै बढ्ने, काँग्रेसको यथास्थितिमा थोरै सुधार हुने र माओवादीको भोट घट्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
माथिल्ला तथ्यहरुलाई हेर्दा भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो भन्ने देखियो । काँग्रेस दोश्रो र माओवादी तेश्रो हो भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन । यही कुरा स्वीकार गरेरै भरतपुर महानगरमा दुई पार्टी बीचमा तालमेल भएको हो । आफू बलियो भएको ठाउँमा कसैले पनि तालमेल गर्दैन । जस्तो भरतपुरमा एमालेले कसैसँग तालमेल गरेन । यसको पछाडि उसले एक्लैले चुनाव जित्नसक्ने आँकलन गरेकोले हो । काँग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भएपछि उनीहरुको भोट पनि पक्कै बढेको छ । मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा अब भरतपुरको मेयर को बन्ला कौतुहलताको विषय बनेको छ । हामी यस आलेखमा भरतपुर महानगरभित्रको अवस्थाको चिरफार गर्ने कोशिष गर्नेछौं ।
भरतपुर महानगरभित्र माथि उल्लेख गरिएको तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ । चितवनको क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा एमालेले जितेको छ । यस क्षेत्रमा पर्ने साविकका पाहाडी चार गाविसवाहेक अरु सबै भरतपुर महागनरमा पर्दछन् । पाहाडी गाविसहरु अहिले इच्छाकामना गाउँपालिका बनेका छन् । यसमा एमाले थोरै मतले अगाडि छ । तीन नम्बर क्षेत्रको अधिकाँश मत भरतपुर महानगरमा पर्दछ । जहाँ नेपाली काँग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि एमालेले टक्कर गर्न सक्छ । यसै क्षेत्रमा एमालेको गढको रुपमा परिचित कविलास गाविस अहिले भरतपुरको २९ नं. वडा बनेको छ, भरतपुरको वडा नं. २, ११ र १२ पर्दछ । यस क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. १ र १० मा पनि एमाले बलियो छ । यसै क्षेत्रमा पर्ने महानगरको वडा नं. ३ र ४ मा काँग्रेस र एमाले हाराहारीकै अवस्थामा छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा नेपाली काँग्रेस तुलनात्मक रुपमा एमालेभन्दा बलियो छ भने क्षेत्र नं. ५ मा काँग्रेसको तुलनामा एमाले निकै बलियो छ । क्षेत्र नं. ४ र ५ का वडाहरु ५, ८, ९, १३, १६, १८, २१, २२, २३, २४, २५, २७ र २८ मा एमाले बलियो देखिएको छ । यसैगरी वडाहरु ६, ७ र १९ मा एमाले–काँग्रेसबीच कडा प्रतिष्पर्धा रहेको र अन्यमा काँग्रेस केही बलियो छ । भरतपुर महानगरको वडा नं. १३ मा माओवादी दोश्रो र २३, २७ र २८ मा राप्रापा दोश्रो अवस्थामा छन् । बाँकी वडाहरुमा एमालेको प्रतिष्पर्धा नेपाली काँग्रेसकै उम्मेदवारसँग हुने हो । यसरी एक्लाएक्लै चुनाव लडेमा भरतपुर महानगरपालिकामा एमाले सहजै विजयी बन्थ्यो ।
काँग्रेस र माओवादीको तालमेल पछिको अवस्थाः
संविधानसभा निर्वाचन २०७० र उपनिर्वाचन २०७१ भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था अझै खस्केको छ । यसबीचमा माओवादीले आफूबाट फुटेर गएका बादल समूहलाई समेट्ने प्रयास गरेपनि यसबीचमा माओवादीको योजनाकार मानिएका डा. बाबुराम भट्टराई बाहिरिएका छन् । चितवन डा. बाबुराम समूहको प्रभाव क्षेत्र पनि हो । यसबाट माओवादीलाई खासै फाइदा भएको छैन । केही वर्षयता माओवादीमा क्षयिकरण शुरु भएको छ, संविधानसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनकै नतिजा हे¥यो भने एक वर्षभित्रमा माओवादीको चार हजार भोट घटेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । यसरी हेर्दा यस निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा माओवादीले १७–१८ हजार भोट कटाउन मुस्किल पर्छ । माओवादीले जिल्लामा कुनै भूमिका नभएकी रेणु दाहाललाई मेयर पदमा उठाएको छ । माओवादीलाई मेयर छाडेको भनेर नेपाली काँग्रेसभित्र ठूलो असन्तोष पैदा भएको छ । अहिलेको अवस्थामा महानगरभित्र काँग्रेसको ३४–३५ हजार हाराहारी मत छ । यसको तीन चौथाई अर्थात् २६–२७ हजार मत माओवादीलाई पर्न गएपनि माओवादीको पोल्टामा ४४ हजार बढी मत पर्दैन ।
आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि नै एमालेले भरतपुरमा ३७–३८ हजार मत पु¥याएको थियो । त्यही अनुपातमा मत बृद्धि हुँदै जाने हो भने एमालेको आफ्नै मत ४५–४६ हजार बढी आउँछ । इमान्दार र स्वच्छ छविको व्यक्तित्व बनाएका स्थानीय नेता देवी ज्ञवालीलाई नेकपा एमालेले मेयर पदमा उठाएको कारण कतिपय काँग्रेस समर्थकले पनि उनलाई भोट हाल्छन् । यस्तोमा काँग्रेस समर्थक र सर्वसाधारणको गरी एमाले उम्मेदवारलाई सात–आठ हजार भोट थपिने अवस्था छ । यसरी हेर्दा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको पक्षमा ५२–५३ हजार मत आउने देखिन्छ । भरतपुर महानगरभित्र डेढलाख मतदाता छन् । त्यसमध्ये एक लाख २० हजार मत खस्न सक्छ । त्यसमा पाँच–छ हजार मत खाली र बदर हुन्छ । यसक्षेत्रका राप्रापा उम्मेदवारले १०–१२ हजार मत ल्याउन सक्छन् । अन्य उम्मेदवारहरु सात–आठ हजारमै समेटिन्छन् । यस्तोमा भरतपुरको मेयर पद नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले जित्ने प्रष्ट देखिन्छ । उपमेयरमा भने समिकरण बेग्लै हुनसक्छ । उपमेयरमा एमाले उम्मेदवारले पाउने मत भनेको ४५–४६ हजार मात्रै हो । उनको आफ्नै लोकप्रियताले दुई–तीन हजारभन्दा मत बढ्दैन । यसरी उनको मत ४७–४८ हजार मत आउँछ । उता उपमयेरमा काँग्रेसको मत दायाँ–बायाँ हुँदैन । उनलाई माओवादीको मत थपिँदा उनको पनि ४६–४७ हजार मत आउने देखिन्छ । यसरी हेर्दा उपमेयरमा एमाले–काँग्रेस कडा टक्करको अवस्था छ । र झिनो अन्तरले एमालेकी दिव्या शर्माले विजयी हुन सक्छिन् ।
(बर्तौला तथ्याङ्क शास्त्रमा विद्याबारिधी गर्दैछन् ।)
भरतपुर अस्पतालमा लैंङ्गिक संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको तयारी
भरतपुर, २८ चैत । अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि भरतपुर अस्पतालमा तयारी थालिएको छ ।
हिंसामा परेका महिलालाई अल्पकालीन आवास, कानुनी उपचार, पुनस्र्थापना, प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिने विषयको सुनिश्चितता र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने गरी लैंङ्गिक हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।
‘महिलाहरु शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, संस्कृतिक रुपमा हिंसामा पर्ने गर्दछन् । उनीहरु हिंसामा परेपछि उपचार नपाइरहेको अस्वस्था छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जेन्डर ईक्यूटी सिनयर एड्भाईजर सिताराम प्रसाईले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा हिंसापीडित महिलाहरुको तीब्र गतिमा उपचार गर्नको लागि दुई साताभित्र केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’
केन्द्र स्थापना गर्नको लागि यहाँका सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरिसकिएको उनले बताए । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराउनको लागि राज्यले ७५ वटै जिल्लामा चार वर्षअघि लैंङ्गिक हिंसा कोष स्थापना गरेको थियो ।
‘सरकारको चाहना लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितहरुलाई उपचार लगायत अन्य आवश्यक सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने हो’ प्रसाईले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवं संरक्षण, मानसिक एवं मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रकृयाद्वारा पीडितलाई सेवा पु¥याइन्छ ।’ सेवा संचालन गर्नका लागि एक जना स्टाफ नर्स करारमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको वर्ष घोषणा गरी हिंसापीडित महिलाहरुको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१२ मा २१ जिल्लामा केन्द्र स्थापना गरियो । शाखा बिस्तारस्वरुप चितवनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो ।
चितवनसहित यस वर्ष आठ स्थानमा अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुँदैछ । धुलीखेल, काभ्रेपलाञ्चोक, सुनसरी, पाँचथर, सोलुखुम्बु, सर्लाही, तनहुँ, नवलपरासी, बर्दिया, प्यूठान, डोटी, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र रौतहटका जिल्ला अस्पतालमा यो सेवा सञ्चालन भएको छ ।
यसैगरी धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बाग्लुङ्, महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल सप्तरी, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल हेटौँडा र दाङमा समेत यो सेवा पु¥याइएको छ । लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार, तीस प्रतिशत महिला अझै विभिन्न हिंसामा परेका छन् ।
एकद्वार केन्द्र स्थापना भैसकेपछि हिंसामा परेका महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उनले बताए । हिंसा प्रभावितको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण उपचार अभिलेखीकरण, शारीरिक चोटपटकको उपचार गर्ने, कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक पर्ने नमूनाको संकलन, परीक्षण एवं संरक्षण, गर्भ परीक्षण तथा आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा र यौनजन्य संक्रमणको उपचार तत्काल अस्पतालले गर्नु पर्नेछ ।
‘अस्पतालमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्था तथा हिंसापीडितहरु स्वयं आउन पनि सक्नुहुन्छ । उहाँहरुको अस्पतालले तीब्र गतिमा सहज रुपमा उपचार गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यहाँ उपचारका लागि सम्भव भएन भने केन्द्रले अन्य स्थानमा लगेर भए पनि निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ ।’
अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय समिति बन्नेछ । स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला सेवा केन्द्र रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, संकट व्यवस्थापन केन्द्रका मेडिकल अधिकृत, नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला एकाईका अध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका अधिकृत र सम्बन्धित अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदस्य रहेन छन् ।
उपचार सेवा लिएर फर्केपछि हिंसा नदोहोरियोस् भन्नका लागि नियमित सम्पर्क गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी प्रमाणका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्साजन्य नमूनाको संकलन परीक्षण एवं संरक्षणका लागि अस्पतालले धेरै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अधिकृत रेखा राणा बताउँछिन् । ‘कतिपय स्थानमा अस्पतालका कारण हिंसाका प्रमाणहरु हराउने गर्दछन्’ उनले भनिन्, ‘पीडितलाई तीब्र गतिमा न्याय दिनको लागि अस्पताल पनि जिम्मेवार बन्नु प¥यो ।’
घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको घरेलु हिंसा र कसुर ऐन २०६६ अनुसार, घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना भन्ने बुझिन्छ । यो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ ।
धम्की, जबर्जस्ती वा स्वेच्छाचारी तरिकाले महिलालाई स्वतन्त्र हुनबाट वञ्चित गराउने कुनै पनि कार्यलाई कानूनले महिला हिंसाको परिधिमा राखेकोे छ । आफ्नै घरका पुरुष वा घरेलु सम्बन्ध भएका अन्य सदस्यद्वारा महिलामाथि हुने हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिएको छ ।
भरतपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. युवानिधि बस्यौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजयकान्त झा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक श्रेष्ठ, सहभागीका कार्यकारी निर्देशक शालिग्राम शर्मा पौडेल, आदर्श नारी गृहकी अध्यक्ष मिना खरेलले सुझाव दिएका थिए ।
Preeti - Unicode-Preeti
माडी, २७ बैशाख । बाढी नियन्त्रण गर्नको लागि माडी नगरपालिका–३, रतनीमा निर्माण गरिएको स्पर
(ड्याम) निर्माणमा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ ।
जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, दुई वटा उपभोक्ता समितिको नाममा ६६ लाख ६० हजार चार सय ६८ निकासा भएको रकम दुरुपयोग भएको हो । बाढी नियन्त्रण गर्नको लागि माडीको रतनीमा दुई वटा उपभोक्ता समितिले काम गरेको स्पर निर्माणमा रकम दुरुपयोग भएको देखिएपछि माडीबासीले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
दुई वटा आयोजनाको नाममा ६६ लाख ६० हजार चार सय ६८ रुपैयाँमध्ये तोकिए अनुसार खर्च विवरण मुल्याङ्कन गर्दा ३५ लाख १९ हजार ९७ रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसरी जाली खरिद, जाली भर्ने, ठाउँ मिलाउने, ढुवानी, ढुङ्गा लगायतको रकम मुल्याङ्कन गर्दा करीब ३३ लाख रुपैयाँको चलखेल भएको देखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडामा बुझाएको विवरण र वास्तविक खर्चको विवरण हेर्दा रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ । मदन पौडेल संयोजक रहेको रिउ खोला संरक्षण समिति साविक माडी न.पा.–१० ले ४२ लाख ४५ हजार आठ सय ३२ रुपैयाँको लागतमा १२ मिटरका जम्मा पाँच वटा स्पर निर्माण सम्पन्न गरेको छ । रतनी सिमरा कृष्णनगर राइटोल बगही रिउ खोला नियन्त्रण उपभोक्ता समितिको नामबाट नौ मिटरको एउटा र पाँच मिटरका दुई वटा स्पर निर्माण भएको छ । यसको अध्यक्षमा कुलबहादुर दुरा रहेका छन् ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदन पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाको टेण्डर अनुसार नै काम सम्पन्न भएर रकम निकासा भएको बताए । निकासा रक...
‘महिलाहरु शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, संस्कृतिक रुपमा हिंसामा पर्ने गर्दछन् । उनीहरु हिंसामा परेपछि उपचार नपाइरहेको अस्वस्था छ’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जेन्डर ईक्यूटी सिनयर एड्भाईजर सिताराम प्रसाईले भने, ‘भरतपुर अस्पतालमा हिंसापीडित महिलाहरुको तीब्र गतिमा उपचार गर्नको लागि दुई साताभित्र केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’ केन्द्र स्थापना गर्नको लागि यहाँका सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरिसकिएको उनले बताए । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराउनको लागि राज्यले ७५ वटै जिल्लामा चार वर्षअघि लैंङ्गिक हिंसा कोष स्थापना गरेको थियो । ‘सरकारको चाहना लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी हिंसा प्रभावितहरुलाई उपचार लगायत अन्य आवश्यक सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने हो’ प्रसाईले भने, ‘उपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन एवं संरक्षण, मानसिक एवं मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार बहुपक्षीय संयोजन प्रकृयाद्वारा पीडितलाई सेवा पु¥याइन्छ ।’ सेवा संचालन गर्नका लागि एक जना स्टाफ नर्स करारमा राख्न पाउने व्यवस्था रहे...
कालिका नगरपालिकामा भावी मेयरको चर्चा
खोलेसिमल, २९ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकामा चुनावी चहलपहल बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको मिति बैशाख ३१ गतेलाई मध्यनजर गर्दै ठूला तीन दलहरु वडा भेला, बैठक, कमिटी गठन र छलफलमा जुटेका छन् । साविक जुटपानी, पदमपुर, शक्तिखोर र सिद्धि गा.वि.स. समेटी ११ वडा भएको यस नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय नेताहरु दौडधुपमा छन् ।
उनीहरु आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तासंग भेटघाट र सम्बन्ध सुधार गर्न लागिपरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने आन्तरिक चुनावी रणनीतिमा लागे पनि बाहिरी वातावरणमा देखिएका छैनन् । हरेक चोक र चिया पसलमा कुन पार्टीका को मेयर, को उपमेयर बन्ने भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । नगरमा मेयर, उपमेयर बन्ने आकांक्षीहरुको नाम नेपाली कांग्रेस नगर समितिले संकलन गरिसकेको छ । कांग्रेसका १२ जनाले मेयर पदको लागि इच्छा व्यक्त गरेको नेपाली कांग्रेस कालिका नगर सभापति राजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । मेयरमा इच्छा व्यक्त गर्नेहरुमा कमल आचार्य, शिवराम के.सी., राजु श्रेष्ठ, लिलाबहादुर गुरुङ, सरोज गुरुङ, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, काशीराम गिरी, इन्द्रप्रसाद अधिकारी, मिलन पाण्डे, शिव शर्मा पौडेल, महाश्रम शर्मा र अशोकराज वाग्ले रहेको श्रेष्ठले बताए । मेयरका आकांक्षीमध्येबाट सर्वसम्मतको प्रयास थालिएको र २९ गते मंगलबारसम्म सहमतिको आधारमा तीन जनाको नाम क्षेत्रीय समितिमा पठाउने प्रयास भइरहेको श्रेष्ठले बताए । १२ जना नै पार्टीका सक्षम कार्यकर्ता भएकाले पार्टीले अवसर दिए सबैल...
महिला सहभागिताको प्रश्न
पुरुषहरुको तुलनामा नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता निक्कै कममात्र रहेको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । तर, देशको नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका रहने राजनीतिक दलमा नै महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित भएको छैन । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । अहिले देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरुमा पनि महिलाको सहभागिता निकै कम रहेको छ । मुलुकका मुख्य तीन दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन । राजनीतिमामात्र नभई महिलाहरु सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसावले पनि पछाडि परेका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा महिला साक्षर प्रतिशत ५७ र पुरुषको ७५ रहेको छ । शिक्षाको कमीका कारण पनि महिलाहरुले पुरुषको तुलनामा अवसर पाउन सकेका छैनन् । महिलाहरुलाई शिक्षित बनाएमात्र उनीहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्दछन् । शिक्षित महिलाले नै अन्धविश्वास, रुढीवादी बिचार र गलत संस्कृतिको बिरुद्ध लड्न सक्दछन् । यसैगरी महिलाको हातमा आम्दानीको श्रोत पनि छैन । उनीहरुको रोजगारी र आम्दानीको स्रोतसम्म पहुँच पु¥याउन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आम्दानीको स्रोतमा पहुँच नभएकै कारण अधिकांश महिलाले पुरुषहरुको अगाडि हात थाप्नु पर्ने हुन्छ जसले महिलाहरुलाई अगाडि बढ्न बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । सदियौंदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरु एकैपटकमा पुरुषहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । ...
नयाँ वर्षमा इन्द्रणी साँझ
चितवन, २९ चैत । नारायणगढको नारायणी कला मन्दिरमा बैशाख एक गते गरिमा इन्द्रेणी साँझ २०७४ आयोजना हुने भएको छ ।
कला मन्दिरले सोमबार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी इन्द्रेणी साँझबारे जानकारी गराएको हो । पाँच सय दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय ४० देखि ४५ जना कलाकारले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने नारायणी कला मन्दिरका अध्यक्ष उमेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
इन्द्रेणी साँझको प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रवेश पास लिनेहरुलाई बेलुकाको खाना र खाजा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । मौलिक गीत तथा स्थानीय कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष ईन्द्रेणी साँझ आयोजना हुँदै आएको कला मन्दिरका उपाध्यक्ष अमर प्रधानले जानकारी दिए । इन्द्रेणी साँझमा अनुराधा क्षेत्री, एकराज रोकाया, सबिना गौतम, बिना सेञ्चुरी, मधु लामा लगायतले गीत प्रस्तुत गर्नेछन् । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड मुख्य प्रयोजक रहेको कार्यक्रमा सानमिगेल, ओल्ड दरबार, चौतारी यातायात व्यवसायी समिति, ग्रिस्भ पावर, बुडलेस ट्रेडिङ, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, त्रिदेव घर जग्गा कारोबार प्रायोजक रहेका छन् ।
अनियमित गर्नेलाई कावार्ही गर !
सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणा अनुसार कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीहरुसँग भर्ना, मासिक वा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउदैनन् । तर, व्यवहारमा भने अझै पनि कतिपय विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुनै लाग्दा चितवनका कतिपय विद्यालयहरुले प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने तयारी गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छैन । तर जिल्लाका सदरमुकामकै कतिपय विद्यालयहरुले नियम विपरीतका शुल्क असुल्दै आएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनुको अर्थ पुरानो कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कक्षा चढ्ने र नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना हुने समय हो । हरेक बैशाख महिनासँगै नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ र यहि प्रकृया दोहोरिन्छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा निःशुल्क घोषणा गरेको ठाउँमा त विभिन्न नाउमा शुल्क लिने गर्छन् भने निजी विद्यालयहरुमा त नयाँ शैक्षिकसत्र ज्यादै महंगो पर्ने गरेको छ । राजधानीका कतिपय विद्यालयहरुले शिशुको भर्ना एक लाखसम्म लिने गरेको देखियो । हरेक बर्ष विद्यार्थीहरुले महँगो बुझाएर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि पुस्तक, स्टेसनरी र पोसाकको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै महँगो पर्दछ । सरकारले एउटा कक्षा पास गरेर त्यसै विद्यालयको अर्को कक्षामा पढ्दा भर्ना गर्नु नपर्ने नियम बनाएको छ तर निजी विद्यालयहरुमा त्यो नियम लागु...